Xakamaynta Tayada - Xuzhou QLT Trade Co., Ltd.
Waxyaabaha Saftey Warbixinada SGS
Dhalooyinkayaga waxaa tijaabiyey oo caddeeyey dhinac saddexaad oo madax banaan oo muujinaya in heerka leachaalka iyo heerarka cadmium ay u hoggaansamayaan qawaaniinta FDA. Xaqiiqdii, heerarkeennu way ka hooseeyaan xadka la oggol yahay ee ay dejiso FDA. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan natiijooyinka baaritaankayaga, nala soo xiriir.
Ku saabsan Shahaadada SGS
SGS waa shirkada hogaamineysa baaritaanka, xaqiijinta, tijaabinta iyo shahaadeynta. Waxaa naloo aqoonsaday inay tahay halbeegga caalamiga ah ee tayada iyo daacadnimada. Adeegyadeenna asaasiga ah waxaa loo qaybin karaa afar qaybood:
Tijaabinta: SGS waxay haysaa shabakad caalami ah oo xarumo tijaabooyin ah, oo ay ka shaqeeyaan shaqaale aqoon iyo khibrad u leh, taas oo kuu suurta gelinaysa inaad yareyso khataraha, isla markaana aad gaabin karto waqtiga suuqyada aadna tijaabin karto tayada, nabadgelyada iyo waxqabadka alaabadaada ee la xiriira heerarka caafimaadka, amniga iyo heerarka sharciyeynta.
Shahaadada: Shahaadooyinka SGS waxay awood kuu siinayaan inaad muujiso in alaabtaadu ay waafaqsan tahay heerarka qaranka iyo xeerarka ama heerarka macaamiisha lagu qeexay, iyada oo loo marayo shahaadada.
Shahaadada Kormeerka Mareykanka ee FDA GMP
Injineeradayada gudaha kujira waa US FDA GMP Inspecion shahaado haysta. Shahaadada Baaritaanka ee FDA GMP waxay bixisaa tilmaamo ku saabsan qabashada howlo lagu qiimeynayo u hoggaansanaanta warshadaha ee Sharciga Cuntada, Dawada, iyo Is qurxinta iyo sharciyada kale ee ay maamusho FDA.